ကျန်းမာရေးသုတ Archives - Page 104 of 107 - Latest Myanmar News
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ရှင်းလင်းထားမယ်
အဆုတ် ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဂျင်းနဲ့ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ အဆုတ် လည်း ပါဝင်နေပါတယ် …. ။ ဒါ့ကြောင့် အဆုတ် ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးပြီး အဆုတ် ကို သန့်စင်အောင် ထားရှိဖိုိ့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေဆိုရင် အဆုတ် ကို သတိထားပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးသင့်ပါတယ် ….. ။ ဂျင်း ဂျင်းကို အသုံးပြုပြီး အဆုတ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တွေ့ရှခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ဂျင်းမှာ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ….. ။ အဆုတ်ကိုသန့်ှရှင်းဖို့ဂျင်းရေနွေးကြမ်း … Read more
ရေနွေးသောက်ခြင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ရေနွေးသောက်တာက လျှာမှ အရသာခံဖုလေးတွေကို နိုးကြားတက်ကြွစေသလို ကျန်းမာရေးအတွက် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နာကျင်မှုသက်သာခြင်း ရေနွေးသောက်တာကြောင့်် ခေါင်းကိုက်တာမှ အစပြုပြီး ဓမ္မတာ ကိုက်ခဲတာအထိ နာကျင်မှုတွေ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးက ၀မ်းဗိုိက်ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ အစာခြေစနစ်သန့်စင်နိုင်ခြင်း မနက်စောစောမှာ ရေနွေးတစ်ခွက်သောက်တာက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကိုိ သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေနဲ့တခြားဖျော်ရည်တွေကအစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ဖြိုခွဲဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဆံသားကျန်းမာစေနိုင်ခြင်း ရေနွေးသောက်တာကြောင့် ဆံသားတောက်ပြောင်ပြီး ပျော့ပျောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆံရင်းမြစ်မှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကို စွမ်းအင် ရရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ အရေပြားကျန်းမာစေနိုင်ခြင်း ရေနွေးသောက်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က နွေးထွေးပြီး အစိုဓာတ်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်ကောင်း မွန်စေတဲ့အတွက် နှင်းဆီရောင်သန်းတဲ့ အသားအရေမျိုးလည်း ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေနိုင်ခြင်း ရေနွေးသောက်လိုိက်တာကြောင့် အာရုံကြောစနစ်အတွင်း စုပုံနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုိ သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ … Read more
ရေချိုးနည်း ရေမချိုးမီ ရေတစ်ခွက် ကြိုတင်သောက်ပါ။ရေမချိုးမီ ဆီးအရင်သွားထားပါ။ရေမချိုးမီ ခြေဖဝါးကို ဆားပွတ်ပါ။ရေချိုးသည့်အခါ ရေကို အစွန်းအဖျားမှ စလောင်းပါ။ သိပ်အေးတဲ့ရေကို မချိုးရ ။သိပ်ပူတဲ့ရေကိုလည်း မချိုးသင့် ။ နွေရာသီမှာ မနက် ၇ နာရီကစပြီး နေပြထားတဲ့ရေနဲ့ နံနက် ၁၁ နာရီမှာ ချိုးပေးပါ။အကယ်၍ သိပ်အေးရင် အခါးရွက်ပြုတ်ရည်ကို ကိုယ်အပူချိန်နဲ့မျှရုံချိုးသင့်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာကိုလည်း ရှားစောင်းလက်ပတ် မန်ကျည်းတို့ပါဝင်တဲ့ ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ။ရေချိုးပြီးတဲ့အခါ ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ သနပ်ခါးရေကျဲကို နေ့စဉ် မှန်မှန် လိမ်းပေးပါ။ နှာခေါင်းပိတ်ပြီးသလိပ်ထွက်ခြင်း အသားယားခြင်း နားသိပ်မကြားခြင်း မနက်ပိုင်း နှာခေါင်းပိတ်ပြီးသလိပ်ထွက်ခြင်း အသားယား နားသိပ်မကြားရခြင်း နေထိုင်စားသောက်ပုံ …ခရမ်းမှ မေးထားတဲ့ အမေတစ်ယောက်အတွက် ….ယားတယ်ဆိုတာ – အခါးဓာတ်နည်းတာ ရေချိးသည့်အခါ အခါးသုံးရမယ် ။ ခရမ်းမှာ ကန့်ကလာပေါတယ် … Read more